TUKASHO IYO TUMASHO – Maandoon
October 10, 2018 Shaafici Xasan Maxamed
Santuukh cad baa hortiisa gudub u yiil oo uu dul taagnaa, dhabarkiisana waxaa safsafnaa boqollaal rag ah, oo badankoodu aysan sidiisa oo kale cimaamado cascas huwaneyn, khamiisyo cadcaddina cirbaha u joogin, ee ku lebbisnaa surweello, shaatiyaal, suudad iyo funaanado ka la midabbo duwanaa. Janaasada uu u taagnaa ma ay ahayn salaaddii ugu horraysey ee uu maalintaas iimaan ka noqday, oo saacado yar ka hor waa kii dad kuwan ka tiro badnaa tukashadii jumcaha u khudbeeyey.
Canbaro Guutaale shalay barqadii bay go’day iyada oo muddo jirraneyd oo isbitaallo ka la duwan midba mar jiiftey, marmarna guriga lagu baxnaaninayey. Haddii ay qof iyo xanuunno isweeraraan waxa uu gabowgu u hiilliyaa xanuunnada. Dadyowgii hore badankoodii waxaa xasuuqay malakamawd ugu soo dhuuntay xaska gabowga. Islaantan waxaa isugu habarwacday dhawr jirro iyo filkeeda oo siddeetan madaxa la galay. Shiikh Kabriid oo markaas janaaso la dul taagnaa ma uu ahayn curadkii hooyo Canbaro, ma uu ahayn curadkuxigeen, mana uu ahayn dhasheedii tobanka ahayd kuwooda dhexe. Hal haweeney baa isaga ka yarayd, oo waxa uu Kabriid qarka u fuulay in uu noqdo gurodanbayskii hooyo Canbaro.
Markii ay shalay habartu nafbaxday waxaa la joogey haweeney ay ku dhalmodeysey oo Kabriid ka yarayd, oo magaceeda la yiraahdo Tarraxo Daaxuur iyo dad ay habar Canbaro ayeeyo u ahayd oo dhawr ahaa. Dadkaas badankoodu markii ay duqdu meyddey waxa ay isu jiibiyeen oohin ay indhohoodu ilmo godladeen, sankoodana uu duuf ka darrooray. Dadkii ugu horreeyey oo geerida lagu wargeliyey waxaa ka mid ahaa Kabriid Daaxuur oo aan ooyin, ee ku farxay in ay hooyadi ka baxday dhibaatooyinkii jirrooyinka iyo filku isu kaashadeen. Waxa uu shiikhu rumaysnaa in qofkii jirrooyin ay ka bixi waayaan ay u fiican tahay in uu geeriyoodo, isla markaas dadka xannaaneeya laftooda ay u roon tahay in ay xabaalaan oo ay ka nastaan. Aayad Qur’aan ah oo ka hadlaysa in uu Eebbe dadka leeyahay, xaggiisana loo noqon doono ayuu dadkii la joogey maqashiiyey, niyaddana waxa uu iska yiri ”Iyada iyo annagaba waxaa noo fiican in ay dhimatay, oo ay silica adduunka ka baxday”.
Janaasada afar jeer baa ”Eebbe ayaa ugu weyn” oo carabi ah la yiraahdaa. Oraahdaas carabiga ah oo afarta goor lagu soo celceliyo waxaa lagu dhex walaaqaa Qur’aan, duco iyo nebi ammaan. Shiikh Kabriid Daaxuur afka waa uu ka akhriyey arkaantii janaasada, laakiin uurka iyo maskaxda waxa uu ka faallonayey naag naaso waaweyn lahayd oo indho waaweyneyd, oo ay aaladda internetka ama falkiska habeenno iyo habeenno ku sheekaysteen. Waxa uu ku fakarey in ay naagtaasi ka fiicnayd dumarkii uu guursadey iyo haween kale oo uu la baashaali jirey. Isaga oo weli janaasadii u taagan buu niyadda ka xisaabiyey waxyaalaha ay naagtaasi dheerayd dumarkiisii hore. Waxa uu isyiri ”Kow waa ay sheeko macaan tahay oo waa lagu marqaamaa haasaaweheeda iyo xalladda sheekadeeda. Labo barida iyo naasaha ayey u weyn tahay, dhexdeeduna waa ay yar tahay. Saddex korontadeedu waa magnad oo markii ay wax dareento codkeeda ayaa isbeddela oo waa ay gariirtaa, waxa ayna ii sheegtay in aan lagu soo samayn qalliinka dumarka soomaalida lugaha dhexdooda lagaga sameeyo. Afar waa ay iga heshay oo caashaq baa galay”.
Qore/Shaafici Xasan Maxamed
Sheekada oo dhammaystiran halkaan ka dheego ayadoo PDF ah
Sheekada Tukasho iyo tumasho
← Abeesada diinta iyo siyaasadda
MIYAA UU FASHILMEY INTERNETKU? →
June 21, 2018 Cabdi Ismaaciil Comments Off on Ustaad Maxamuud Maxamed Taha iyo sixidda fikirka Islaamka (3/3)